Ihlathi le-crystal_. UJohn McClaine uba ngamahlaya (nevesi). | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | eziningana
Ngiyibone ezinsukwini ezimbili ezedlule futhi ngiyayithanda. Kungabi ngaphezulu noma ngaphansi UJohn McClaine, omunye wamaqhawe ami amakhulu. Ihlathi lekristalu, ifilimu yesenzo yakudala kusuka 1988, elandelayo izoshicilelwa I-17 ngo-Okthoba ngefomethi ye- amahlaya nge-Amazon. Kepha…
... kubonakala sengathi ku- isi-english. Sizobona uma ngabe kukhona uhlelo ngeSpanishi. Kunjalo I-32 páginas lokho kuthengiswa ngamadola ayi-17, cishe I-14 euro. Isipho sokubhalisela uKhisimusi, yize singahloselwe ikakhulukazi abancane, kepha abadala kunabo bonke endlini.
2 Yini evumelanayo
cunt iskripthi kasomahlaya waseMelika, umbhali nomculi Uphondo lweDoogie, kuboniswe yi umdwebi wekhathuni UJJ Harrison, osebenzele iDisney, Nickelodeon, Peguin Ramdon House noma iMarvel. UHarrison akazange ayeke ubudlova noma igazi emidwebeni yakhe, elanda izigcawu ezigcina ngokungagodli i umongo kwe-movie.
Umbhalo uvumelanisa okudume kakhulu inkondlo emhlabeni wama-Anglo-Saxon Ukuvakashelwa okuvela kuSanta Nicholas, waziwa kakhulu ngevesi lakhe lokuqala (Kwakungubusuku obandulela ukhisimusi), okushiwo imbongi yaseMelika UClement clarke moore futhi yashicilelwa ku- 1823. Kepha-ke, nansi inguqulo ekhululekile elandisa, evesini, konke okwenzeka kwifilimu.
Kwakungobusuku obandulela uKhisimusi, lapho endlini yonke kungashukunyiswa sidalwa, ngisho negundane nje. Amasheya alengiswa ngokucophelela eziko, enethemba lokuthi uSanta Nicholas uzoba khona maduzane.
Izingane zacwila kamnandi emibhedeni yazo, zaphupha uswidi udansa emakhanda azo; noMama ophethe isikhafu sakhe nami ngiphethe isigqoko sami, sasilungiselela ukulala ubusika obude; lapho kuvela isiphithiphithi edlelweni ngaze ngeqa embhedeni ukubona ukuthi kwenzakalani […].
¿Ngubani ongabonanga Ihlathi lekristalu? Ngubani ongazi iphoyisa uJohn McClaine ngobuso nomzimba we Bruce Willis oneminyaka engamashumi amathathu? Ubani ongakaze abonakale ku- Los Angelese Ulale kahle, emasangweni e INakatomi Plaza? Ubani ongazange akhulekele eyodwa amashinga amahle kakhulu of cinema, the lousy Hans Gruber with the elegance of that magnificent English actor who was Alan Rickman?
Ngubani ongazange azijabulise ngayo umshayeli wemoto ngubani okhiywa endaweni yokupaka engaphansi komhlaba? Noma nge Umenzeli uPowell, amadonathi abo nokukhulu kwabo izingxoxo emsakazweni noMcClaine phakathi kwawo? Noma ngokungakwazi nokungakwazi ukusebenza kwama-ejenti we FBI? Ngubani ongazange unqume izinyawo Ukuwela ukungcola kwengilazi ngemuva kwesigameko esibabazekayo esitezi esiphezulu?
Kulungile lokho. Lokho okucishe kube ngcono kuyisipho wonke amaMcClaines asemhlabeni angazinika sona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Ihlathi le-crystal_. UJohn McClaine uba ngamahlaya (nevesi).